Isixhobo sokulungisa i-inbox siyasilela
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Impazamo engalindelekanga ithintele ukufikelela kule fayile. Sebenzisa i-ScanDisk ukukhangela idiski kwiimpazamo, uze uzame ukusebenzisa isixhobo sokuLungisa i-inbox kwakhona.
Isixhobo sokuLungisa i-inbox siyasilela ukulungisa iiFayile zePST ezonakeleyo okanye ezonakeleyo
Xa usebenzisa i-Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) ukulungisa ifayile eyonakeleyo okanye eyonakeleyo yeefayile zangasese (PST), isixhobo siyasilela kwaye sinika ingxelo yomyalezo wemposiso olandelayo:
Isixhobo sokuLungisa i-Inbox asiyiboni ifayile ye-xxxx.pst. Akukho lwazi lunokufunyanwa.
apho 'xxxx.pst' ligama lefayile yePST eya kuvulwa.
Apha ngezantsi kukho umfanekiso wempazamo:
Urhwaphilizo okanye ukonakala kwefayile ye-PST kubi kangangokuba isiXhobo sokuLungisa i-inbox (Scanpst) asikwazi ukulungisa ifayile.
Ifayile eyonakeleyo: Uvavanyo2.pst
Ifayile elungiswe ngu DataNumen Outlook Repair: Uvavanyo2_fixed.pst